Firefox 83 inosanganisira kuvandudzwa kwePiP uye rutsigiro rweMacs nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Firefox 83, kuburitswa nenhau zhinji kupfuura zvakajairwa izvo zvinosanganisira zvinodzora zvePiP uye rutsigiro rweMacs matsva
Mumwedzi ichangopfuura, kuburitswa kweshanduro nyowani dzebhurawuza reMozilla inhau, asi kwete zvakare kunakidza. Izvi zvave zvakadaro sezvo vachitipa vhezheni nyowani svondo rega rega, asi nguva pfupi yapfuura ivo vakatanga Firefox 83, uye ndinofunga kuti tinogona kuti ichi chakakosha kusunungurwa. Kutanga, isu vedu vanoshandisa yako PiP vanozokoshesa madhiraivhu atichakwanisa kushandisa kubva nhasi, chimwe chinhu icho ini pachedu ndakakubvunza iwe masvondo mashoma apfuura.
Kune rimwe divi, uye sezvanga zvichitarisirwa, Firefox 83 yakachengetedzeka kupfuura shanduro dzekare, asi zvakare ndezvekuti vakawedzera basa nyowani kana maitiro atinogara tichiisa mapeji ewebhu neHTTPS. Pazasi iwe une rondedzero nenhau dzakatanhamara izvo zvauya pamwe neshanduro iyi, uye pane chimwe chinhu kune wese munhu, kusanganisira avo vanoishandisa pane inobata skrini.
Pfungwa dzeFirefox 83
Sezvatinoverenga mu kusunungura chinyorwa, ichi ndicho chinoratidzwa chinouya neshanduro ye83 yeFirefox:
Yakagadziriswa mashandiro ne15%, peji mhinduro ne12%, uye yakadzora memory yekushandisa ne8%.
HTTPS chete maitiro. Iyo yakaremara nekutadza uye, sekureva kwezita, inomanikidza kushandiswa kweHTTPS.
Tsigiro yemasaini akadai sePinch-to-Zoom kuti uswededze mukati nekubuda kana uchishandisa Firefox pamatehwe ekubata.
Kudzora kutsva kwePiP, iyo ichatibvumidza kufambisira mberi kana kunonoka vhidhiyo gumi nemashanu uye kukwidza / kudzikisa vhoriyamu.
Kunatsiridzwa kwekufona kunoitwa muFirefox.
Tsvaga basa rekuvandudza.
Tsigiro yeAcroForm iyo inotibvumidza kuzadza, kupurinda uye kusevha PDF uye muoni ane maonero akavandudzwa.
Tsigiro yeMac Mac matsva. Mune iyi vhezheni, ichashanda naRosseta 2, asi mune ramangwana ichazoshanda natively.
WebRender inorovera mukati kune mamwe Windows 7 nevashandisi vasere nevashandisi veMacOS kubva pa8 kusvika 10.12.
Zvimwe zvinogadziriswa uye kugadzirisa kuchengetedzeka.
Firefox 83 ikozvino inogona kutorwa kubva ku yekuvandudza webhusaiti. Mumaawa mashoma anotevera ichavandudzwa mumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kweLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Firefox 83, kuburitswa nenhau zhinji kupfuura zvakajairwa izvo zvinosanganisira zvinodzora zvePiP uye rutsigiro rweMacs matsva
SAD DNS: kurwisa kwekutsiva data rekunyepedzera muDNS cache